स्थानीय तहमा समायोजित अधिकृतको गुनासो : संघको जुनियर अधिकृत आए हाकिम ! - टाकुरा न्युज
स्थानीय तहमा समायोजित अधिकृतको गुनासो : संघको जुनियर अधिकृत आए हाकिम !
by सुशील बास्तोला
प्रकाशित मिति : २०७८ साउन ७ गते, २०:५६ बजे
इटहरी : मुलुक संघीय संरचनामा गई सकेपश्चात् आम चासो बनेको विषय थियो – कर्मचारी व्यवस्थापन ।
यसरी संघीय संरचनामा कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न बनेको तत्कालिन नेकपा सरकार कर्मचारी अध्यादेश २०७५ जारी भयो । र, यसको कर्मचारीस्तरबाट विरोध पनि भयो । तर, मन्त्रिषरिषद्ले प्रशासन सेवा सामान्य प्रशासन समूहको दरबन्दी बढाएसंगै विरोध एकाएक सेलायो ।
एकातर्फ कर्मचारी समायोजनमा पीडित बने प्रशासन सेवा, लेखा समूह र शिक्षा सेवा । जसमध्ये अधिकृत कर्मचारीहरु अझ बढी मारमा परेका छन् ।
समायोजनका बखत सानो समूहले गरेको विरोध कहिँ कतैबाट सम्बोधन भएन । बरु उल्टै मन्त्रालयबाट धम्कीपूर्ण सूचना जारी गरिए । अध्यादेशमा भएका रोज्नुपर्ने तह नरोजेमा जुनसुकै तहमा समायोजन गर्ने नियमलाई प्रकाश पारी पारी सूचना जारी गर्दै कर्मचारीलाई समायोजन फाराममा धेरै भन्दा धेरै तहहरु रोज्न बाध्य बनाइयो ।
यसबेला समायोजित भएका अधिकृत कर्मचारीहरुमध्ये गाउँपालिकामा समायोजन भएका अधिकृत कर्मचारीलाई आफूभन्दा जुनियर संघको अधिकृत हाकिम भएर आउने समस्याले पिरोल्न थालेको छ । यस्तो समस्या हुनेमा काभ्रे जिल्लाको रोशी गाउँपालिका रहेको छ ।
उक्त पालिकमा २०७४ सालमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट लेखा अधिकृतमा स्थायी नियुक्ति भएकी लेखा अधिकृत सुमित्रा पौडेल अधिकृतस्तर सातौं तहमा समायोजन भइ दुई वर्षदेखि कार्यरत छिन् । सोही पालिकामा २०६९ सालमा शिक्षा सेवाको शाखा अधिकृत नियुक्ति भएका रामबहादुर तामाङ्ग समायोजन पश्चात अधिकृतस्तर आठौं तहमा कार्यरत छन् ।
तर, हाल उक्त पालिकामा २०७७।०३।०९ गते नायब सुब्बाबाट जेष्ठ तथा कार्यसम्पादनका आधारमा बढुवा भई अधिकृत भएका अधिकृत पर्शुराम थापालाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २०७८।०४।०१ को मितिमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कामकाजका लागि पठाएको छ ।
यसरी समायोजनका बखत जुनियर अधिकृतलाई हाकिम बनाएर पठाउँदा कर्मचारीहरुको मनोबल कमजोर रहन जान्छ । सोही कारण संगठनलाई कर्मचारीले सोचेअनुरुप काम दिन कठीन हुन्छ ।
यो व्यवस्थाले आजको खरिदार पदको कर्मचारी, शाखा अधिकृतमा बढुवा भई हाकिम भएर आउने व्यवस्था हुनुले कर्मचारीहरुमा निरुत्साहन हुन्छ । कर्मचारीहरुको उपसचिव पदमा बढुवा हुने कुनै माध्यम नै छैन । र, संघमा दरबन्दी नै कम छ ।
मन्त्रालयको यो किसिमको व्यवहारले कर्मचारीहरु साँच्चै नै निरुत्साहित भएका छन् ।
(बास्तोला नेपाल निजामती कर्मचारी संघका केन्द्रीय सदस्य हुन् ।)
प्रदेशस्तरीय सेफ प्रतियोगितामा इटहरीको स्कील क्याम्पस प्रथम
प्रकाशित मिति : २०७९ असार ६ गते, २१:२४ बजे
धरान : प्रदेशस्तरीय अन्तर प्लस टु सेफ प्रतियोगितामा इटहरीको स्कील क्याम्पस प्रथम भएको छ । कलेजका नवीन खड्का र इक्सा...
पैसाकै अभावमा इन्टरनेट र शिक्षाबाट वञ्चित भएकालाई भायानेटले ‘गुड विथ इन्टरनेट’ कार्यक्रममार्फत सहयोग गर्दै
प्रकाशित मिति : २०७९ असार ६ गते, १७:१७ बजे
स्व.जयनन्द लामा अभिनित चलचित्र ‘अभियान’ को ट्रेलर इटहरीमा सार्वजनिक
प्रकाशित मिति : २०७९ असार ४ गते, १९:३४ बजे
धरानका वीर नेम्वाङ्ग नगद एक लाखसहित सम्मानित
प्रकाशित मिति : २०७९ जेष्ठ ३० गते, २०:५६ बजे
इटहरीको बेदान्त हस्पिटलमा हाडजोर्नी रोगको सफल उपचार हुँदै
प्रकाशित मिति : २०७९ जेष्ठ २८ गते, २१:५२ बजे